फिल्म समीक्षा : सन्तानहरुका लागि ‘आमा’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ११, २०७६ गाेकर्ण गाैतम
यस फिल्ममा आमाको सन्तानप्रतिको त्याग अनि आमाप्रति सन्तानको प्रेम त अनुभूत हुन्छ नै, मानवीयता लोप हुँदै गएको हाम्रो सामाजिक परिवेशको कठोर चित्रण पनि गरिएको छ। कमजोरी पक्कै छन् तर निर्देशक कथा र पात्रप्रति इमानदार रहेकोमा सन्देह छैन। त्यस्ता पात्र पर्दामा देख्न पाइन्न्, जुन हाम्रै वरपर नभएका हुन्। अर्थात, आत्मियबोध गराउने अनेक गुणले भरिएको छ फिल्म। केही पात्रमा अनावश्यक संकट थोपरेर संवेदना ‘क्यास’ गर्ने चक्करचाहिं नभएको होइन। केही अप्रासांगिक बोझिला संवाद पनि छन्।
आमा (मिथिला शर्मा)को छोरा अमेरिकामा छन्, यता श्रीमान्को भर्‍याङबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्छ। आफैंले गाउँबाट काठमाडौं अस्पतालसम्म ल्याउँछिन्। यहाँ छोरी आरती (सुरक्षा पन्त) र ज्वाईं (मनिष निरौला) छन्, उनीहरुले उपचारमा सहयोग गर्छन्। पैसा सकिदै जान्छ तर निको हुन्न। छोरो अमेरिकाबाट आउन पाउँदैनन्, आफ्नै पारिवारिक बन्धनमा परेकी छोरीले जसोतसो हेरचाह गर्छिन्। तर, आमा आफैं दिनानुदिन कमजोर भइरहेकी छन्। उनले भोग्ने यावत् हन्डर र छोरीको साहसमा केन्द्रित छ फिल्म।
सरसर्ती हेर्दा ‘आमा’मा केही छैन। किन छैन भने यसमा ठूलो उतारचढाव हुन्न, न सर्वगुण सम्पन्न वलशाली ‘हिरो’ छ, न खुंखार भिलेन। चमकधमक छैन। अझ रोमान्स, कमेडी, एक्सन, आइटम गीतजस्ता मसला त छँदैछैन। तर पनि ‘आमा’ले दर्शकलाई बाँधिराख्छ। त्यसको कारण हो, पात्रमार्फत निर्देशकले स्थापित गर्ने कारुण चित्र। मिथिला शर्मासहित हरेक चरित्रको आफ्नै व्यथा छ तर त्यो पोख्न आफ्नो मान्छे साथमासमेत हुँदैनन्। त्यसैले त भेन्टिलेटरमा राखिएका पति (देशभक्त खनाल) सामू मिथिला बह पोख्छिन्, पति प्रतिक्रियाविहिन छन् तर उनको मन हल्का हुन्छ। भागदौडपूर्ण सहरमा बसेर पनि एक्लो महसुस गर्ने हरेकले उनको पीडालाई आत्मसात् गर्न सक्छन्।
‘आमा’मा तीन आमाहरु छन्। एक मिथिला शर्मा, जसको वयस्क छोरा आपत पर्दा साथमा छैन। दुई सरिता गिरी, जो भर्खर आमा भएकी छन् तर छोरा बिरामी भएकाले छुनसमेत पाएकी छैनन्। तीन निसन्तान आमा सुरक्षा पन्त। जसलाई आमा बन्ने तीव्र इच्छा छ तर शरीरले साथ दिएको छैन। हरेक आमाको पीडाको आयतन र स्वरुप फरक छ तर त्यसले दिने चोटचाहिं समान। आमाहरु समाजमा विद्यमान अव्यवस्था र विभेदका प्रतिनिधि हुन्। आमा हुन नसकेकै कारण सुरक्षाले विस्तारै अपहेलना सहनु पर्छ, बुबा इन्तु न चिन्तु हुँदा पनि हरबखत उनको साथमा हुनसक्दिनन्, किनभने बुहारीका रुपमा उनको आफ्नै जिम्मेवारी (बन्धन?) हुन्छन्।
निर्देशकले प्राथमिकता नदिएको तर दर्शकले सम्झिराख्ने भूमिकाचाहिं सरिता गिरीको हो। रेमिट्यान्सकै कारण प्रसव वेदनाबाट छटपटिरहँदा र छोरा जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा पनि विदेश गएका उनका पति फर्कन सक्दैनन्। खनालले नै यसको पटकथा लेखेका हुन्। पात्र चयन र उनीहरुको समीकरण निर्माण उपयुक्त लाग्छ तर सोहि अनुरुप कथालाई गति दिएका छैनन्। एकै परिवेशमा घुम्ने भएकाले कतै–कतै झिँजो लाग्छ। अस्पतालभित्र र बाहिरका उस्तै प्रवृत्तिका दृश्यलाई महत्व दिइएको छ।
सिनेमा दृश्यभाषा हो। सिर्जनशील माध्यम हो। तर, हाम्रा सिनेमामा सबैभन्दा खट्किने पक्ष यीनै हुन्। बिकाउ शैलीमा, संवादको सहाराले सिधैं कथा भन्नमै दंग पर्छन् निर्देशक। सोहि कारण फिल्मको प्रभाव कानसम्म मात्र हुन्छ, मन र मस्तिष्कमा छुदैन। पूर्ण त होइन, आंशिक सही, ‘आमा’मा यी गुण अटाएका छन्।
पात्रको मनजस्तै मौसम पनि रुझिरहेको छ। अस्पतालको बेडमा लम्पसार पतिको घडी रोकिएला भन्ने ठूलो चिन्ता छ, मिथिला शर्मालाई। उनी छोरासँग बरोबर कुरा गर्छिन् तर छोराको बोली मात्र सुनिन्छ, मुहार देख्न पाइन्न। आवाजबाटै दर्शकको दिमागमा चरित्र निर्माण हुन्छ। आरतीले रक्तदान गरेको, एम्बुलेन्स चालकले आफूले चाहेको अस्पताल पुराइदिएको, सिकारु चिकित्सकको द्वविधापनजस्ता अनेक दृश्यले मन हुँडल्छ। पात्रको मनोविज्ञान अनुरुप दृश्य खिच्नु र सोहि अनुरुपको रंगमा ढाल्नु निर्देशकको खुबी हो। यसको छायांकार खनाल नै हुन्।
यो फिल्म आमामामात्र सिमित छैन। यसले लुटाहा अस्पताल, ‘सेतो कोट’भित्र लुकेको अपराध, धार्मिक अन्धभक्तता र त्यसको प्रचार, मान्छेहरुमा हराउँदै गएको संवेदना, शिक्षितबाटै पत्नीमाथि हुने दुव्यर्वहारजस्ता समाजका अध्याँरा यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। तर, खनालले कतिपय पात्रलाई आफ्नो सजिलोको लागि अस्वभाविक रुपान्तरण गरेका छन्। जस्तो : ज्वाईंमा आएको बदलाब। आरतीलाई बलियो बनाउनकै खातिर उनलाई नकारात्मक बनाइएको भान हुन्छ। आरतीकी बुढी सासु र घरबेटीको व्यवहार विश्वसनीय लाग्दैन। अस्पतालका मुख्य चिकित्सक र सञ्चालकलाई एकोहोरो रुखो बनाइएको छ। यी चरित्रको उपस्थिति असंगत लाग्छ। आमाको त्याग देखाउने कि अस्पतालको लुट, रेमिट्यान्सले निम्ताएको विग्रह देखाउने कि आजका छोरीमा आएको सशक्तिकरण, खनाल कतै–कतै अल्मलिएझैं लाग्छ।
क्लाइमेक्समा जर्बजस्ती रुवाउने नियतबाट निर्देशक निर्देशित छन्, त्यो आफैंमा चित्तबुझ्दो छैन। पृष्ठभूमिमा बज्ने गीतले मूलकथाको भाव बोकेको छ तर त्यसलाई अझ सानो स्वरमा राखिदिएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। फिल्ममा सबैभन्दा बिझाएको पक्षचाहिं पार्श्व ध्वनी हो। यसले दृश्यमार्फत पैदा हुने संवेदनालाई मुर्त बनाउन होइन, बिथोल्न भूमिका खेलेको छ। पात्र र परिस्थितिअनुरुप दृश्य सिर्जने निर्देशकले यतातिर ख्याल गर्नुपर्थ्यो।
हुलियामात्र होइन, बोलीचाली, भाव र व्यवहारबाट मिथिला शर्मा आमा लाग्छिन्। आमासँगै पत्नीको भूमिकालाई न्याय गरेकी छन्। उनका केही संवाद भने बनावटी छन्। सुरक्षा पन्तको चरित्र त बलियो छ नै, अभिनय पनि जीवन्त लाग्छ। यो फिल्मले अभिनेत्रीका रुपमा उनको आयु थप्नेछ। यद्यपि सुरुवाततिरै अस्पतालमा रिसाउनेजस्ता केही दृश्यमा भने उनी पात्र र परिवेशभन्दा बाहिर गएर ‘क्रान्तिकारी’ बन्न खोजेकी छन्। यसमा निर्देशकको नियन्त्रण चाहिन्थ्यो। साँघुरो स्पेसमा दरिलो प्रभाव जमाउन सक्षम छिन्, सरिता गिरी। छोटो भूमिकामा देखिन हिच्किचाउनेका लागि उनको चरित्र र अभिनय उदाहरण बन्न सक्छ।
पर्दामा अभिनय गरिरहेको जस्तो नलाग्ने अर्को कलाकार हुन्, मनिष निरौला। रंगमञ्च पृष्ठभूमिका मनिष चुनौतीपूर्ण भूमिकामा विश्वासयोग्य छन्। आशान्त शर्मा, सरोज अर्याल, अस्मिता खनालजस्ता सहायक कलाकार पनि प्रसंशनीय छन्। दीपेन्द्र के. खनालको सबैभन्दा उत्कृष्ट फिल्म ‘पशुपतिप्रसाद’ मानिन्छ। ‘आमा’मा निर्देशकीय शिल्प अझ निखारिएको छ। वैचारिक र सामाजिक चित्रणमा पनि यही फिल्म अगाडि उभिएको छ। संवेदनशिल विषयलाई रचनात्मक शैलीमा बुनेका छन्। लेखनचाहिं उतिविघ्न कसिलो होइन।
सिनेमा र समाजको दूरी बढिरहेको छ। पर्दामा देखाइने संवदेनाहरु कृत्रिम हुँदै गएका छन्, जे चल्छ, त्यही बनाउने लहड मौलाएको छ। यो निरस माहोलकाबीच ‘आमा’लाई जन्म दिएका खनाल धन्यवादका हकदार हुन्। ‘आमा’ उत्कृष्टताको मानक पक्कै होइन। यही ‘लिगेसी’ पछ्याउँदा उत्कृष्टतामा पुगिनेचाहिं सत्य हो।
फिल्म : आमा
लेखन/निर्देशन/छायाँकन :दीपेन्द्र के. खनाल
कलाकारहरु : मिथिला शर्मा, सुरक्षा पन्त, सरिता गिरी, मनिष निरौला आदि। प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ १९:५२
राजेशले यस संवादको अर्थ लगाए पनि यसलाई कमेडीकै रुपमा प्रयोग गरिन्छ। 'यसको अर्थ नबुझ्नेलाई हे त खाली हेहे मात्र हो' उनले भने।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ १९:४७